Askar miyaa galbaday?
You are here: Home Home Askar miyaa galbaday?
Waa maalin kale……maalin geesi kale galbaday….geerida loo dhalay waana wax aan la gafayn oo xaq ah….Guulluhu qabriga kuu nuur…Gabboodkaaga guryihii nagaa ee jannada ka yeel.
“Dibno ii ma gooyaan,
Laba daw mid iga xidhan,
Iga dayrsan nacasnimo,
Iga deyran lahashadu,
Iga duuban googgoos,
Boholyowna iga dedan,”
Waa 19kii Ramadaan 1431ka Hijriyada oo ku began 29ka Ogost 2010ka. Maalintu maalmo kuma jirto oo waa Sabti, marka maalmihii Soomaalidii hore loogu magac-dayona waa Soo-roga. Waa Ramadaan oo caadi ahaan bisha aan hawsha xafiiska ka fasax qaato ah, bal se qorshayaasha iyo hawlaha Akaademiga oo aan yarayn inta badan maalmaha qaarkood ayaan gaadhaa. Waa xilli saacaddu ku beegnayd ilaa 11.00kii saacadood ee subaxnimo. Tilifoonkii gacanta ayaa soo dhacay. Waan qabtay. Saa waa dhinicii kale oo leh: “Aabbo, waxa gurigii walaashii ee idaacadda ku dhawaa saaka ku dhintay Cabdillaahi Askar.” Waa wiilkaygii aan soddogga u ahaa ee Amiin Cabdillaahi Xaashi. Wuxu intaa iigu daray: “Aniga ayaa soo ogaan doona waqtiga la aasayo oo kuu soo sheegi doona.” Aniguna aniga oo naxsan ku idhi: “Hawraarsan, aabbo, haddii kalena anba waan soo ogaan doonaa.” Sidaa ayaan tilifoonkii ku dhigay. Wax yar ka dib ayuu I soo garaacay Mujaahid Kaariye oo aanu jabhaddii ku wada jirnay, halgan-wadaag iyo saaxiibbaba ilaa maantada aynu joogno nahay. Isna gabbalka dhacay ii sheeg. Dhowr tilifoon ayaan ma-huraankii jabhadda u diray, warka igu soo noqonayayna wuxu ahaa salaadda casar ayaa lagu tukanayaa. Sidii ayaan ku hoyday aniga oo murugaysan oo hadba sida hillaaca ay ii soo marayaan muqaalladii nololeed iyo jabhadeed ee Cabdillaahi Askar Barkhad aanu wadaagnay.
Waxay xusuustu dib iigu celisay Muqdisho iyo beryihii aanu halkaa wada joognay. Wuxu ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray Ciidanka Xoogga dalka ee Soomaaliyeed. Waxaan arki jiray isaga oo direyskii ciidanka lebbisan oo wata baabuur yar oo Jarmal ah oo buluuki ah oo malahayga ciidankoodu ergiso ahaan uga haysan jireen ciidankii booliska Soomaaliyeed. Waxaan sidaa u leeyahay, baabuurta noocaas ah Jarmalka ayaa deeq ahaan booliska u siin jiray, halka baabuurta millaterigu ka iman jirtay dalkii Midowga soofiyeti. Maalmaha qaar ayaanu wada fadhiisan jirnay. Waxay aad isugu xidhnaan jireen Axmed Maxamed Halac oo isna ahaa korneyl ciidanka booliska ka tirsanaa haddana naafo ahaan ugu nool dalka Iswidhen.
Beryahaa aanu Muqdisho joognay hadalhayntu wax kale ma ahayn oo aan ahayn sidii heeryadii Siyaad Barre la iskaga rogi lahaa. Beryahaa saraakiisha aan Muqdisho ku bartay ee hawlahan ku foognayd waxa ka mid ahaa Dayib Gurey oo isaguna maalmahaa aroos ku ahaa meel Guriga Shaqaalaha ka hooseysa. Hargeysa iyo Qaybtii 26aad waxaan ka sii xusuusnahay saraakiishii aan la kulmi jiray ee hawlahan ku jirtay: Maxamed Kaahin Axmed, Aadan Sheekh Maxamed oo Shiine loo yaqaannay iyo Maxamed Xaashi Diiriye, Lixle. Waxa kale oo Muqdusho isaguna aanu ku wada xidhiidhi jirnay Cabdilqaadir Koosaar Cabdi oo maareeye ka ahan jiray wersheddii hilibka ee Kismaayo. Mujaahid Koosaar wuxu saraakiisha kale dheeraa isaga oo ahaa dadka suugaanta xiiseeya ee sida aadka ah u dhandhamiya. Waxaan xusuustaa sidii aanu isugu cindanayn xilliyadii ay Deelleeydu aawanayd ee ay Muqdisho, dalka iyo dibaddiisaba haysatay.
Cabdllaahi Askar Barkhad, wuxu ku dhashay kuna barbaaray dalkaa Itoobiya. Waqti ku sinnaa 1966kii ayuu Dugsigiisii sare ku dhammaystay magaalada Diri-dhabe, beryahaa ka dib oo uu u soo wareegay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed. Wuxu qortay oo uu ka mid noqday ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed isaga oo tababar ciidan oo madaafiicda ah loogu diray dalkii Midowga Soofiyeti oo uu saddex sannadood ku maqnaa. Hawlo badan ayuu ka soo qabtay xooggii dalka iasaga oo xilliyada qaarkood tababare ka ahaa dugsigii tababarka ee Kismaayo. Dagaalkii 1977kii wuxu ka galay Godey sidii ay in badan isaga iyo Cabdilqaadir Koosaar iiga sheekeeyeen. Waxaan sii xusuustaa nin sarkaal ahaan jiray oo la odhan jiray Ina Salaad Cawar oo ay aad uga sheekeyn jireen oo goobihii dagaalka ku dhintay.